> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan Quicktime MOV in DVD ah Player
MOV waa qaab file kaydinta videos digital la qeexitaanka sare oo caadi ahaan loo isticmaalo in diiwaanka fiidiyo ah. Daawashada file MOV QuickTime on DVD ciyaaryahan waa fursad weyn, sababtoo ah waxaa dar-weeraryahanka karo iyo dib u socon dhakhso badan iyo video oo ay waafaqsan-qeexidda sare. Si kastaba ha ahaatee, files QuickTime MOV ma tahay ciyaaryahan DVD natively ay taageerayaan qaab, aad u baahan tahay si ay u badalo galay files-dhismeedka DVD ku haboon. In this article, waxaad ku baran doonaa laba xal fudud oo deg deg ah.
Xalka 1: Beddelaan MOV in gaare DVD ee Mac iyo Windows ah
Xalka 2: Gubashada MOV in DVD ciyaaryahan si toos ah Mac iyo Windows
Xalka 1: Beddelaan QuickTime MOV in gaare DVD ee Mac iyo Windows ah
Si loogu badalo MOV in DVD gaare ee Mac iyo Windows, waxaad u baahan tahay adag ah oo si sahlan loo isticmaali video Converter sida Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxay awood u aad iyo dib u sarifaan video ka mid ah tan oo ah qaabab video iyo codsiyada la tayada sameecadda ah iyo 30X xawaaraha diinta.
Download Free maxkamad halkan version:
Iyada oo fudud oo 3 tallaabo, waxaad buuxin doonaa raanta qaab aan muuqan,
Si fudud u jiidi oo hoos u files MOV aad si toos ah u furmo suuqa barnaamijka.
Riix qaab wax soo saarka si ay u doortaan wmv (for Windows DVD gaare), ama iDVD (for Mac OS) sida qaab wax soo saarka.
Hit button loogu badalo ka furmkidoona MOV in ay diinta ka DVD gaare.
Diinta in ka dib, waxaad heli doontaa files wmv ama iDVD MP4 videos leh tayo wanaagsan leh. Hadda, aad ka hor tegi karin si ay u gubaan faylasha la gediyay la Windows DVD Kan sameeyey ama Mac iDVD siday u kala horreeyaan. Waayo, sidee ay gubaan MOV in DVD la DVD gaare in Windows, fadlan eeg this tutorial . Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan halkan ka fiiri si aad u barato sida loo gubi MOV in DVD la iDVD.
Fiiro Gaar ah: Wixii user Mac, waxaad isku dayi kartaa iDVD ay gubaan files MOV ka hor iyaga diinta. Sida aan ognahay in H.264 kaliya (.mp4) iyo MPEG-4 (.mp4) ay ku aqbaleen iDVD on Mac socda Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa, Mountain Libaaxa, iwm Haddii files MOV aad aan la aqoonsan aad iDVD, fadlan isku day kor ku xusan video Converter u Mac .
Xalka 2: Gubashada QuickTime MOV in DVD ciyaaryahan si toos ah Mac iyo Windows
Si aad u gubi MOV in DVD ciyaaryahan qaab aan muuqan oo si degdeg ah oo aan transcoding, waxaan jeclaan lahaa in la wadaagto thata barnaamijka weyn badasha file movie wax gal disk ah DVD, DVD folder, ama ISO file sawirada. Waxay bixisaa 90 nooc oo Hababka DVD menu kartoon ah oo ma guurto ah oo lacag la'aan ah, oo waxay bixisaa a-urursiga in editor video taas oo ka caawisa inay isku shaandheyn, dalagga iyo jar video files si meesha looga saaro letterboxing, dalagga ama qabsadaan clips aad ugu jeceshahay. Taasi DVD Creator ( DVD Creator for Mac ). Download maxkamadda lacag la'aan ah halkan:
1 dar files MOV
Jiid oo si toos ah u hoos videos QuickTime MOV in daaqadaha ugu muhiimsan ee barnaamijka ka dibna riix "↑" iyo "↓" si ay u habayn iyo amarka.
2 Dooro DVD menu iyo edit files MOV (Ikhtiyaar)
Riix ah "Menu" badhanka hoose ee midigta hoose ee interface ugu weyn ee ay ku soo galaan suuqa kala menu tafatir ah. Halkan, waxaad dooran kartaa in ka badan 90 nooc oo Hababka kartoon ah oo ma guurto ah DVD menu oo lacag la'aan ah ama si fudud u dooro "Menu No".
Qoraaga MOV videos ka hor guba, oo kaliya dooran guji icon qalin ag video kasta / slideshow sawir ama muujiyo clip iyo xaq guji dooranayaan Edit si ay u helaan suuqa kala tafatir ah.
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo bilaabaan in ay gubi
Marka ay qabtaan oo dhan qoraalka ah, waxaad riixi kartaa "Kulanka Xiisaha Leh" si aad u hubiso haddii eveything dhaco sida aad jeceshahay. Marka qancay, riix Guba si loogu badalo MOV in DVD ciyaaryahanka. Ka hor inta gubashada, fadlan ka fikiraan TV ee Standard: Dooro "NTSC" haddii aad ku nooshahay USA, Canada iyo Japan oo dooran "Pal" loogu talo galay dadka ku nool Europe iyo Asia dal.
Guba QuickTime MOV inay talooyin DVD ciyaaryahan:
DVD Creator ( DVD Creator for Mac ) wuxuu taageeraa dhamaan noocyada recordable caanka ah disc: DVD-5 iyo DVD-9; DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-RAM. Si kastaba ha ahaatee, waa lagula talinayaa in ay doortaan DVD-R sida wax soo saarka, sababta ay tahay mid aad u la jaan qaada ciyaartoyda DVD guriga. Wixii aqoon badan oo ku saabsan DVD saxanno, fadlan eeg this article .
Top 10 Best WinX DVD Video Software lagu bedelan karo
Windows DVD Kan sameeyey - oo ay taageerto qaabab File